Ny beta 5 an'ny iOS 12 dia mampiseho ny interface an'ny iPad Pro tsy misy rindrambaiko | Vaovao IPhone
Ny beta 5 an'ny iOS 12 dia manome topy maso ny mety ho fampiasa amin'ny iPad Pro raha tsy misy ny frame
Angel Gonzalez | | iPad Pro, About us
La Fanavaozana iPhone Io dia iray amin'ireo lohahevitra mafana indrindra amin'izao fotoana izao. Manaraka izany dia manana ny fanavaozana ny iPad isika, ary ny fironana mankany esory ny frame notanterahin'i Apple hatramin'ny nanombohany ny iPhone X. Na dia maro aza ny fandikana sy ny maodelin'ny iPad vaovao, inona ny fampahalalana bebe kokoa omena tato anatin'ny andro vitsivitsy izay Kaody iOS 12 beta.
Ny fampahalalana vaovao dia avy amin'ny kaody loharanon'ny iOS 5 beta 12 mampiseho fampiasa multitasking boribory izay mifanitsy amin'ireo mandika naely navoaka hatramin'izao. Vakio hatrany dia tsarao ny tenanao.
iOS 12 Beta 5 dia mampiseho fampisehoana marobe: iPad Pro tsy misy endriny?
Ny toetran'ny iPad Pro vaovao dia tsy miharihary fa ny fivoaran'ny iPhone dia ahafahantsika maminavina ny fivoarana mety hitranga. Ny iPhone X dia midika fiovana eo amin'ny tontolon'ny ankehitriny izay nijeren'ny Apple ireo fitaovany. Esory tanteraka ny bokotra Home noho ny fampidirana fifehezana fihetsika amin'ny a fampisehoana lehibe tsy misy sisin-tany izay nihazakazaka isaky ny santimetatra tamin'ny fanesorana saika ny frame rehetra tamin'ny iPhone.
Ny faminaniana momba ny iPad Pro manaraka dia mitovy: iPad tsy misy frame ary tsy misy bokotra Home miaraka amin'ny rafitra Face ID hamaha ny terminal. Na izany aza, tsy manana prototypes ofisialy na fivoahana izay azo itokisana loatra isika ka azo antoka fa izany no ho hitantsika amin'ny lahateny manaraka.
Ny famoahana farany dia avy amin'ny beta fahadimy an'ny iOS 12 izay aseho ny kisary misy sisiny boribory (na dia manana piksel hafahafa aza) miaraka amin'ny anarana J3XX, izay mety ho anarana ara-barotra vaovao an'ny iPad Pro vaovao. Fa ankoatr'izay dia hita izy ireo Sisiny boribory amin'ny singa interface: multitasking. Azontsika jerena amin'ny sary izay mitarika ity lahatsoratra ity ny fomba boribory somary boribory ny sisin'ny zorony. Ary koa, mino izahay fa ny bara ambany izay tahaka ny Bokotra an-trano tsy ho toy izany satria nalaina avy amin'ny a J3XX fanahafana mifototra amin'ny kaody iOS 12.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny beta 5 an'ny iOS 12 dia manome topy maso ny mety ho fampiasa amin'ny iPad Pro raha tsy misy ny frame
Ny adapter headphone 3,5mm dia tsy ho ampidirina amin'ny boatin'ny iPhone vaovao